Mali | KONGOLISOLO
N'ikwu eziokwu, ọ bụ ihe na-akụda mmụọ na ọ bụ ihe nwute ịhụ ụfọdụ Negroes na-emeghị ọmụmụ, ọgụgụ, enweghị nyocha; usoro sayensị, bido imegiderịta, gọnarị, enweghị ezigbo ihe akaebe, na-enweghị eziokwu sayensị
Site na: KongoLisolona: June 15, 2020 11: 11 Enweghị asịsa
Ọ bụ ezie na ọ bụ site na mkparịta ụka ka ọkụ na-enwu. Ọtụtụ oge ụfọdụ ndị isi ojii / ndị Africa na-ewetara nsonaazụ nke nyocha ha, banyere ikike ha, ndị ikpeazụ a na-achọ ...	GỤKWUO
Obodo obodo Yendouma na Mali: Yendouma, bu obodo ime ime obodo Mali na Dogon nke di na Bandiagara, isi obodo Dogon nke di nari iri asaa na asaa n’ebe ọdịda anyanwụ Mopti.
Site na: KongoLisolona: Mee 15, 2020 09: 28 Enweghị asịsa
Mpaghara a dị na mpaghara Sahelian ma nwee gburugburu ebe obibi atọ: ala dị larịị, ugwu na ala ahụ dị larịị. A na-ahazi ndụ Dogon obodo na gburugburu ugwu a nke…	GỤKWUO
Aug13 01: 10